लिम्वूवान - विविध सामग्री: संयुक्त लिम्वुवान मोर्चाले सवैको भावनालाई समेटेर लैजानु पर्दछ
संयुक्त लिम्वुवान मोर्चाले सवैको भावनालाई समेटेर लैजानु पर्दछ
लिम्वुवान स्वायत्त राज्य स्थापना खातिर लिम्वुजन्य संगठनहरु एकवद्ध भएका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । यो लिम्वुवानी जनताहरुको चाहना पनि हो । तर मोर्चावन्दी वनाएर मात्र हुदैन कार्यन्वयनमा पनि जान सक्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि मोर्चामा आवद्ध संगठनहरुले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । चुम्लुङको संयोजन रहेको मोर्चावन्दीमा चुम्लुङ सहित अहिले ७ संगठनहरु लिम्वुवान मुक्ति मोर्चा(वीर नेम्वाङ), लिम्वुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा(नेकपा माओवादी), संघीय लिम्वुवान राज्य परिषद(कुमार लिङदेन), नेपाल लोकतान्त्रिक किरात लिम्वु संघ(नेकपा एमाले), नेपाल लिम्वुवान स्वाशासित संघ एकिकृत(नेकपा एकिकृत), लिम्वुवान प्रान्तीय परिषद(राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी) र नेपाली काग्रेस आवद्ध छन् ।
यसमा लिम्वुवान आन्दोलनमा सक्रीय भूमिका निर्वाह गर्ने संघीय लिम्वुवान राज्य परिषद(सञ्जुहाङ), लिम्वुवान स्वायत्त सरोकार मञ्च, लिम्बुवान सदभाव मञ्च तथा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको उपस्थिती देखिदैन । यी सवैको उपस्थिती यो मोर्चामा हुदा अझ सान्दर्भिक हुनेथ्यो । अन्य संगठनहरुलाई छोडेर लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको सवालमा भन्नुपर्दा मोर्चावन्दी वनाउनको लागि स्वयं म मोर्चाको अध्यक्षको हैसियत तथा हाम्रो मोर्चाको म्याण्डेटलाई लिएर जुलाईमा मोर्चावन्दी र साझा अवधारणा वनाउनु पर्छ भनेर चुम्लुङ लगायत माओवादी लिम्वुवान मोर्चा तथा संघीय लिम्वुवानको नेताहरुसंग काठमाण्डौमा छलफल भएको थियो । तर म हङकङ आएपछिको समयमा वनेको मोर्चावन्दीमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा नपर्नुमा कतै हामी आफैभित्र पनि राजनिती भएको पो छ कि? हुन्छ कि? भनेर सोच्न वाध्य तुल्याउछ । हामीले सम्पर्क गर्दा तपाईहरु हङकङमा शिर्षथ नेताहरु भएकोले भनिएको पाईएतापनि नेपालमा रहेका हाम्रा बिभिन्न संगठन प्रमुख, सम्पर्क अधिकृत तथा सम्योजन समितिहरुले हालसम्म गर्दै आएको कार्य तथा सहभागीताहरु उहाहरुलाई थाहानभएको होईन । थाहा हुदा हुदै बेवास्तागर्नुलाई गम्भिर त्रुटि होईन भन्नै मिल्दैन । यदि त्यसो होभने यस सवालमा भोलिका दिनमा हङकङ, यू.के, यू.एस.ए, जापान. लगायत बिदेशमा रहेका लिम्वु तथा लिम्वुवानवादी संगठनहरुबाट लिम्वुवानले आशा नगर्ने त ? साथै देश बाहिर यस्ता चिन्तन र विवेक भएका तथा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरु छैनन - अथवा कार्यगत एकताको खाचो छैन ? प्रश्न निश्चित गम्भिर हुनुपर्छ । त्यस्तै यो मोर्चाले कार्य गरेको सवालमा के त भन्ने प्रश्न पनि उठेको पाईन्छ-यस सवालमा हामीले हाम्रो तर्फाट धेरै कार्य गरिसकेका छौं । लिम्वुवान स्वायत्त राज्य पूनस्थपनाको सवालमा हाम्रो मागहरु, भनाईहरु, अवधारणाहरु सरकारदेखि सम्पूर्ण लिम्वुवानभरी पुर्याईरहेका छौं । विभिन्न पत्र पत्रिका तथा विद्युतीय माध्यमवाट लिम्वुवानको आवाजहरु मुखरित गरिरहेका छौं । यसै सवालमा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको परामर्श सदस्यवाट लिम्वुवान व्लग स्पट डट कम को तर्फबाट विद्युतीय समाचारको आन्दोलननै छेडिएको यथार्थ पनि भुल्नु हुदैन । संघीय लिम्वुवान राज्य परिषदको प्रतेक आन्दोलनमा र्समर्थन तथा आर्थिक सहयोग गरेका छौं । शहिद राज कुमार आङदेम्वेको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने कार्य पनि गरेको छौं । यसर्थ लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले लिम्वुवान स्वायत्तताको लागि आफ्नो क्षेत्रवाट गरेका विगतका कार्यहरुसगै भावी योजनाहरु पनि उत्तिकै अगाडि आएको छ । यो मोर्चाले लिम्वुवान स्वायत्तको लागि जुनसुकै हालतमा पनि पछि नहट्ने योजना राखेकोछ । साथै लिम्वुवानको अहितमा लाग्ने जो कोहीलाई पनि क्षमा गर्ने छैन ।
यसर्थ लिम्वुवानको लागि मोर्चावन्दी हुने मित्रहरुले सम्पूर्ण लिम्वुवानवादीहरुको भावनालाई समेटेर जान सक्नु पर्दछ । आफु आफुमा प्रतिस्पर्धाको भावना लिनु हुदैन । साथै यो समुह सानो छ । यसको अर्थ छैन भनेर भनिनु हुदैन । ताजा कुरा वुझ्नको लागि माओवादीहरुलाई हेरे पुग्छ । यसै सवालमा पूर्वमा मेची, पश्चिममा सिस्वा, संखुवा, अरुण, सप्तकोशी, उत्तरमा तिव्वत र दक्षिणमा भारतसम्मको भूभाग वाहेकको सिमा क्षेत्रमा सम्झौता गरिनु हुदैन । नेकपा माओवादीभन्दा पनि अघि वढेर नेकपा एमालेले लिम्वुवानलाई अझै विगार्ने कार्य गरेको छ, अब काङग्रेस लगायत अन्य साना पार्टीको हेर्न वाकि नैछ । यसमा तपाई हामी मोर्चामा रहेका र वाहिर रहेका सवैले ध्यान दिएर कार्य गर्नु पर्छ । जसरी हुन्छ त्यसरी पूर्खाको विरासत कायम राख्न हामीले सक्नु पर्दछ । सेवारो। जय लिम्वुवान
अध्यक्ष-लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा
Posted by limbu at 8:43 AM